Celine Dion: Waxaa ku dhuftay dhibaatooyin daran oo isha! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Celine Dion: Waxaa ku dhuftay dhibaatooyin daran oo isha!
Celine Dion: Waxaa ku dhuftay dhibaatooyin daran oo isha!
Dhibaatooyinka caafimaad sii Quebec sano 51 diva ... Waxaa jira kaliya hal sano, turjumaan ee "qalbigayga tegi doonaa on" qudhiisa ku xidhnaa aamusnaan aad ah oo la kansali badan oo qaab ciyaareedkiisa. Sababta "Dhibaato dhex gashay dhegta dhexe taas oo keentay in uu yeesho dhaqdhaqaaqa maqalka oo wuxuu heestaa hees aad u adag, "sida uu ku dhaartey. "Waxay codkeeda si aad ah u dhegaysanaysaa. Waxay maqlaysaa wadankeeda iyo neefsashadooda si aad u qoto dheer "; ayaa sheegay in macalinkiisa Vok Johanne Raby.
Ka dib markii ay qabsadeen howlgal aan caadi aheyn, xaaskiisa René Angélil ayaa awooday inay dib ugu noqoto marxaladda, iyada oo shan jeer oo kale ay kaashato mar kale. Toddobaadkii hore, waxay ku dhawaaqday soo laabashadeeda weyn iyada oo la sii daayay albaab cusub oo bishii November lagu magacaabo "Courage", iyo safar qorsheysan oo maraykanka ah sannadka soo socda.
Haddii ay u aragtay dhibaatooyinka caafimaad ee ka danbeeya, heesaha Canadianka waa qalad. Maanta, waa gabadha hooyadeed - "geesinimadeeda" - in la wajaho. "Ma dareemayso wax aad u wanaagsan, waxayna ku jirtaa xumaanshaha macquulnimada [taas oo keenta dhibaatada ka jirta retina, Ed.] Marka ay ku eegto, waxay wajigeeda u dhigeysaa wax yar oo sidan ah, laakiin way kuusoo aragtaa. Said Celine Dion ee magalada Gala magalada todobaadkan.
Nasiib wanaag, Therese Dion ayaa weli ah dhagax kaas oo kii ka lumay ninkeeda iyo walaalkiis laba maalmood wuu tiirsanaan karaa. "Way fiicantahay. Waxay u timid inay aragto riwaayadeeda waxayna ka tagtay. Waad ogtahay, iyadu waa 92 sano: waa cajiib. [...] Maalin kasta, waxaan u ducee Cirka in ay weli jirto. Anigu waxaan u sheegaa in ay naga tagayso dhammaanteen na wada. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.francedimanche.fr/actualites/celine-dion-frappee-par-un-grave-probleme-oculaire
Wilfried Zaha ayaa lagu sharfay England sababtoo ah falalka naxariis-darrada ah